Warriors of The Nation 2018 | Movie Review ျမန္မာ စာတန္းထိုး
Warriors of The Nation 2018
ဒီတစ်ခါတော့ တရုတ်ကွန်ဖူး သိုင်းကား အများကြီးရှိတဲ့ အထဲမှာ မင်းသားများစွာပြောင်းလဲသရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကျော် ကွန်ဖူးသိုင်းသမား ဝမ်ဖေးဟုန်ရဲ့ Worriors of The Nation ဇာတ်ကားလေးဘဲဖြစ်ပါတယ် မျိုးချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်ကို နိုးဆွပေးတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဆိုရင်လည်း မမှားပေဘူး ၁၉၀၇ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံက တရုတ်အရှေ့ကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အစတည်ရာက တစ်စတစ်စ တစ်တိုင်းပြည်လုံးသိမ်ပိုက်ဖို့ အတွက် Plan ကြီးဆွဲထားခဲ့တယ် အဲ့အချိန် ဘုရင်ရဲ့ အမိန့်နဲ့ကွမ်ကျိုးကို ရောက်လာတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်နဲ့နိုင်ငံတော်ကို ကယ်တင်ချင်တဲ စစ်သေနာပတိ ကျန်းကျိတုန်းနဲ့ ဝမ်ဖေးဟုန်တို့ ပေါင်းမိသောအခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့… ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Ba Chit ပဲဖြစ်ပါတယ်…
The Wrath of Time 2019
Disco Raja 2020
Tanhaji: The Unsung Warrior 2020
Dabangg32019
Sye Raa Narasimha Reddy 2019
The Lego Movie22019
T28-464 On A Day When Our Parents Weren’t Home, I Fucked My Sister All Day Until There Was No Cum
Who Slept with Her 2006
IPX-451 She’s Lifting Her Shame Ban!! – Karen Kaede
Rated 19 Secret Lesson 2020
My Sex Doll 2020
SSNI-619 I Was Having Life-Destroying Orgasmic Sex With The Married Woman Next Door Tsukasa Aoi
The Concubine 2012
Kor Kerd Mai Klai Klai Ter 2020
Emily in Paris 2020
My Girlfriends Elder Sister Is A Horny Bitch
M.S. Dhoni: The Untold Story 2016
Firefox, Chrome, Safari, IE, UC Browser နှင့် အခြား လူသုံးများသော Browser အားလုံးတွင် Download အဆင်ပြေစွာ ဆွဲနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ Facebook, Goolge နှင့် Messenger တို့၏ In App Browser များနှင့် သို့ Facebook Download API များနှင့် Download ဆွဲလျှင် Error ဖြစ်တတ်ပါသည်။
YIFY Website အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး နည်းပညာ အကူအညီ လိုတယ်ဆို Messenger ကနေ တစ်ပတ်ကို ၇ ရက် ပိတ်ရက်မရှိ လာမေးလို့ရပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံးဖြေပေး၊ ကူညီပေးပါမယ်။ Website ကို လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လင့်သေနေတာ လင့်အလုပ်မလုပ်တာ ဆိုရင် Messenger ကနေတစ်ဆင့် Report လုပ်ပေးပါ။ ပြန်ပြီးပြင်ပေးပါမယ်။
Report via Messenger
Copyright © YIFY Myanmar. All rights reserved.
Build with love for Movie Lover in Myanmar